Wiricheya Zvishongedzo zvese zvinotsiva uye OEM | Karman Healthcare
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo
Kuratidza 1-30 ye 39 migumisiro
Kubva pamabhegi emabhegi kuenda kumabhegi uye makushingi kusvika kumagaro emakumbo uye zvimwe zvinotsiva, Karman ane sarudzo hombe yezvigaro zvewiricheya - zvese pamutengo wekudzikisa uye kutumira nekukurumidza. Taona kuti akanakisa zvishongedzo zvinowedzera musimboti mashandiro uye nyaradzo yewiricheya yako. Homwe dzewheelchair muenzaniso wakanaka, aya ma pouch anonamatira kuzvigaro zvemaoko uye anogadzira nzvimbo yakachengeteka yezvinhu zvako pachako uye nyore.
Makombe edu uye zvigaro zvechigaro ndizvo zvakafanira kuva nezvako zvekushandisa. Kutanga nenyaradzo nekutenga edu emushop sarudzo. Wobva waenderera pamusoro kuti utakure mabhegi uye mamwe mabhegi ezvekushambadzira. Kusimudza zororo remakumbo zvakare iri nyore nzira yekuwedzera nyaradzo ipapo. Usakanganwa kuti isu tine misoro yekuzorora zvakare. Izvi ndizvo zvinhu zvinorayirwa uye zvine zvese ipapo kunze kwebhokisi. Vamwe vaizoodha chidimbu chidimbu chidimbu pavanenge vachivaka yavo "yakakwana" chigaro.
Ichi ichokwadi chikamu chinonakidza mukugezera wiricheya. Vamwe vepamberi chikamu vangato hodha kumisirwa zvigaro zvavo semakumbo edatya. Zvimwe zvigaro zvinogona kuve nema mods senge chrome casters kana spinergy wheelchair ine akasiyana mavara sarudzo uye zvimwe zvacho pamusoro pepamusoro shambadziro dzinoputisa pfungwa dzako kure. Asi hesi chigaro chako. Tinoti fara nazvo! Ita yako nhasi nekuwana iwo akakwana wiricheya accessories iwe auri kutsvaga!
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kuti chii chauri kutsvaga? Tarisa uone yedu yekutenga yekutungamira gwara, kana tipe isu kufona pa 1-626-581-2235; mafoni edu vamiririri akamira kuti vapindure chero mibvunzo yaungave unayo.